Uluphi Ulungiso Lokuqala olubhekiselele kwiCandelo leNkcazo?
Isilungiso sokuQala kuMgaqo-siseko wase-United States siqinisekisa ukuba inkululeko yenkampani ye-press e-United States. Nantsi:
"I-Congress ayiyi kwenza umthetho ngokuphathelele ukusekwa kwenkolo, okanye ukuthintela ukusetyenziswa kwe-free okanye ukukhupha inkululeko yentetho, okanye i-press; okanye ilungelo labantu ngokudibanisa ukuhlangana, nokucela urhulumente ukuba ahlaziywe izikhalazo. "
Njengoko ubona, ukulungiswa kokuqala ngokwenene kumagatya amathathu ahlukeneyo aqinisekisiyo kuphela inkululeko yenkxalabo kodwa inkululeko yonqulo kunye nelungelo lokuhlangana kunye nokucela "urhulumente ukulungiswa kwezikhalazo."
Kodwa njengengxelo zendaba zincinci malunga nomshicileli obaluleke kakhulu:
"Inkomfa ayinakuyenza umthetho ... ukunqumla inkululeko yentetho, okanye ye-press ..."
UCandelo loKhuseleko lokuSebenza
UMgaqo-siseko uqinisekisa umshishini wokukhulula, onokuthi uphuculwe ngokubanzi ukubandakanya zonke iindaba eziendaba-iTV, inomathotholo, iwebhu, njl. Kodwa sithetha ntoni nge-press ezamahala? Liliphi ilungelo uMlungiso oPhezulu lokuQinisekisa ngokuqinisekileyo?
Ngokuyinhloko, inkululeko yenkxininiso ithetha ukuba abeendaba abasasaxhaswa nguRhulumente. Ngamanye amagama, urhulumente akanalo ilungelo lokuzama ukulawula okanye ukuvimba izinto ezithile ukususela kwipapasho.
Olunye ixesha eliqhelekileyo lisetyenziswe kulo mongo luyi-pre-contraintment, oko kuthetha ukuba uzame nguRhulumente ukukhusela ukubonakalisa izimvo ngaphambi kokuba zipapashwe. Ngaphantsi kohlengahlengiso lokuqala, ukucinywa kwangaphambili akucaci ngokungahambisani nomgaqo-siseko.
I-Freedom Press kwihlabathi
Nantsi eMelika, sinelungelo lokuba nento ebonakalayo yinkxalabo ekhululekile kwihlabathi, njengoko kuqinisekiswe nguSilungiso sokuQala kuMgaqo-siseko wase-US.
Kodwa ininzi yehlabathi lonke ayinalo inhlanhla. Enyanisweni, ukuba uvale amehlo akho, ujikeleze ihlabathi kwaye uphendule umnwe wakho kwindawo ekhethiweyo, amathuba ukuba ukuba ungenayo elwandle, uya kubhekisela kwilizwe elinemiqathango yokuncintisana yenkalo ethile.
I-China, ilizwe elininzi kunazo zonke emhlabeni, ligcina insimbi kwiimali zendaba.
I-Russia, eli lizwe elikhulu kunazo zonke, lenza okufanayo. Ehlabathini lonke, kukho imimandla yonke - eMbindi Mphakathi ngumzekelo omnye - apho inkululeko yokunqongophala idalwe okanye ingekho.
Enyanisweni, kulula - ngokukhawuleza-ukuqokelela uluhlu lwamazwe apho umshicileli ukhululekile ngokwenene. Uluhlu olunjalo luya kubandakanya i-US neKhanada, iYurophu yaseYurophu kunye neScandinavia, i-Australia kunye ne-New Zealand, eJapan, eTaiwan kunye namazwe ambalwa eMzantsi Melika. E-United States nakwiintlanga ezininzi ezikhuphisayo, umshicileli ujabulela inkululeko enkulu yokunika ingxelo ngokuchanekileyo nangengqiqo kwimibandela ebalulekileyo yosuku. Kodwa kwinkululeko enkulu yehlabathi inkululeko iphela okanye ayikho. Inkululeko yeNdlu inikeza iimaphu kunye namashadi ukubonisa apho iphephandaba likhululekile khona, apho kungenjalo, nalapho inkululeko yenkxuleko iphela.
Kyla Ross Out for the Olimpiki; Ngaba ngokuqinisekileyo Yiba yi-NCAA Superstar elandelayo
Ukuphucula i-Game Pool yakho kunye nalezi Bhilidi zokuCoca
Amazwi anomdla ngokuphathelele iMisty Copeland